News Collection: 'मनभन्दा लुगा नै न्यानो'
३. जाडोमा सबभन्दा बढी केको डर लाग्छ?
प्रायः छाला सम्बन्धी समस्या यो मौसममा धेरै देखिन्छ। त्यसैले यो मौसममा ओठ फुट्ने समस्या मलाई धेरै हुन्छ। सबैभन्दा डर पनि यसैको लाग्छ। त्यसैले लिपगार्डको प्रयोग गर्छु। कहिलेकाहीँ बोक्न बिर्सदा चिन्ता लाग्छ।
४. जाडोमा बाक्लो बाक्लो लुगा लगाउनु पर्दा असजिलो लाग्दैन?
खासै असजिलो हुन्न। बिहान लगाइएको बाक्लो लुगा दिउँसो सुटिङमा फेर्नु परिहाल्छ। साँझ त चिसो भइसक्छ।
५. आगो, घाम र हिटरमध्ये कुनचाहिँ ठिक हो र कुन ताप्नुहुन्छ?
धेरै समय बहिरै बित्ने हुँदा मलाई घाम प्यारो लाग्छ। अझ जाडोमा घाम ताप्दा स्वास्थ्यलाई फाइदै हुन्छ।
६. शरीरलाई तातो राख्न के पिउनुहुन्छ?
कालो चिया धेरै पिउँछु। दिनमा कम्तीमा ५ कप पिउँछु होला।
७. जाडोमा ओछ्यान कति प्यारो बन्दैछ?
अत्याधिक हुन्छ नि। कामको बाध्यता नभएको भए बिहानभर सुत्ने थिएँ। बिहानै साढे ५ मा सुटिङ गर्न निस्कनुपर्छ। कहिलेकाहीँ दिक्क लागे पनि धरै छैन।
८. तपाई बस्ने घर जाडोलाई सुहाउँदो छ कि छैन?
दुवै मौसम सुहाउँदो छ। तर म बेलुका मात्र घरमा हुने हुँदा त्यसको कुनै मतलब गर्दिन। मेरो कोठामा घाम आउँछ।
९. तपाईको अनुभवमा मान्छेको मन न्यानो कि बाक्लो लुगा?
जाडोको लागि हो भने बाक्लै लुगा न्यानो हो। जाडोमा मान्छेको मन बुझ्नुभन्दा आफ्नो शरीर न्यानो बनाउनु राम्रो। मायाप्रेमको मामिलामा भने मन न्यानो चाहिन्छ, लुगा होइन।